कोरोना संक्रमण भइ होम आईसोलेशनमा बस्दै आएका चिकित्सक दम्पतिमाथि दुर्व्यवहार प्रयास « News24 : Premium News Channel
कोरोना संक्रमण भइ होम आईसोलेशनमा बस्दै आएका चिकित्सक दम्पतिमाथि दुर्व्यवहार प्रयास
चितवन, ३० साउन । कोरोना संक्रमित भई होम आईसोलेशनमा बस्दै आएका चिकित्सक दम्पतिमाथि दुर्व्यवहार प्रयास भएको छ । बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा. विश्वबन्धु बगाले बस्दै आएको घरमा शुक्रबार बिहान एक समुहनै पुगेर घरको गेटमा कोरोना संक्रमितको घर भन्दै ब्यानरनै टाँस्ने प्रयास गरियो । यसरी एक झुण्ड रुपमा पुगेको समुहले डाक्टर बगालेको घर गेटमा ब्यानर टाँस्ने मात्र होईन घरनै निकाल्ने प्रयास गर्यो ।
बिहान साढे ७ बजेतिर डाक्टर बगालेलाई आएको एक फोनमा घर बाहिर निस्कन भनिएको थियो । त्यसलगतै डाक्टर बगालेले घर बाहिर हेर्दा उनको घरमा टोल सुधार समितिका केही मानिसहरु आएका थिए ।
उनीहरुको हातमा ब्यानर थियो र ब्यानरमा लेखिएको थियो, -‘कोरोना संक्रमितको घर।’ उनीहरु कोरोना सर्न सक्ने भन्दै सचेत गराउन ब्यानर टाँस्न आएको डा. बगालेले बताउनुभयो । डाक्टर बगाले भने सामाजिक बहिस्कारनै गर्ने गरि घरमा ब्यानर टाँस्न आएको थाहा पाएपछि अचम्ममा परेका थिए । त्यसपछि उनको प्रतिबादपछि उनीहरु फर्किएको उहाँले बताउनुभयो ।
दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिरहने चिकित्सकलाई हौसला दिनुको साटो झन् समाजकै जान्ने बुझ्ने मान्छेले गरेको गलत हर्कतका कारण चिकित्सक जगतमै अपमान बोध गराएको बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका नि बर्तमान अध्यक्ष देबेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यस्तो बेलामा घरको गेटमा फलफुल तथा दुध राखिदिएर सहयोग गर्नु पर्ने हो तर जनप्रतिनिधिबाटै भएको यो काम निनदनिय रहेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।
चितवनस्थित बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा विश्वबन्धु बगालेलाई गत सोमबार कोरोना पुष्टि भयो । उनीसँगै श्रीमतीलाई पनि कोरोना देखिएको छ । बगाले दम्पतीलाई कोरोना पुष्टि भए पनि कुनै लक्षण देखिएको छैन। त्यसैले उनीहरु गत तीन दिनदेखि होम आइसोलेसनमै छन्। सँगै रहेका छोराको भने कोरोना नेगेटिभ आएपछि उनीहरु छुट्टाछुट्टै होम आइसोलेसनमा छन्।
यता बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि पनि दुव्र्यवहार भएको छ । अस्पतालको प्रयोगशालाका काम गर्दै आएकी एक महिला कर्मचारीलाई समेत घरबेटीले घर बस्न नदिएको गुनासो गरेकि छन् । आँफ्नो दाजुहरुसँग खैरहनी स्थित ज्यामिरेमा बस्दै आएकी उनि रत्ननगरमै कोठा खोजेर बस्न थालेकि थिइन्। तर पछि उनलाई अस्पतालको प्रयोगशालामा काम गर्ने भनेपछि कोठामा बस्न नदिएपछि अस्पतालमै बस्न बाध्य भएको प्रयोगशालाका प्रमुख गुरु प्रसाद कंडेल बताउछन् ।
उनि कर्मचारी मात्र नभई प्रयोगशालाका कार्यरत अर्का एक कर्मचारीलाई पनि कोठा निकाला गरिएको छ । आँफनो आमाको स्वास्थ्य अवस्थामा गाह्रो हुने भन्दै होटल क्वारेनटाइन पुगेका उनलाई होटलले बस्न दिएपछि छिमेकी होटलको दवावमा निस्कन बाध्य भएको गुनासो गरे । अहिले उनि अन्यत्र होटल क्वारेनटाईनमा बसेका छन् ।